Qixitaan ki dab ka kacay ayaa yaraday madama hawadi ee wanagsanntay | Multnomah County
Dad badan oo dagana ayaa qaxay habeenkii Isniintii xaafadohodi kaso qaxay sababay dab ka kacay meel lagu kaaydiyo gawarida duugobay. Saraakal ka tirsan caafimaadka oo baray ayaa waxu sheegay subaxnimadii Talaadada in hawada ay fican tahay.
Melaha laga qacxay, 13 Maarso, u na dhaw mesha dabka u ka kacay.
Xalayto abarihi 9:00 fiidnimo waxan ballaarinay qixitan kaso sabaadto eh waxaa ad xumaday xalada hawada sarkaal ka tirsan cafimadka ee Multnomah County Dr. Paul Lewis. Ayuu shir jaraa'id wuxu ku shegay “Nasiib wanaag tijabaadi hawada lugu suubiya abarihi niski dannbe waxa no sobaxday inay so ficananyso”
Ku dhowaad 500 qoys oo ku dhawa mesha dabka halista u ka dhacay-Kuwas oo ku noola inta u dhaxaysa 72nd ila 76th Ave, laga bilaabo Killingsworth ila wadooyinka Alberta-Ayaa wali waaxay lo dalbay ka qaxaan; Hay’adda Ilaalinta Deegaanka ay sii wadi doonto in ay diiwaangeliso heerarka sare ee hawada.
Multnomah County iyo Laanqarta Cas ayaa guryo ku meel gaar ah ka fureen habeenki isniinta, gurayahaso ku yalo 1415 SE 122nd Ave. Waxay soo dhaweeyeen 135 qof iyo 15 xayawaan. Guryahas ku meel garka oo u furnan dona dadki ay u suurto gali waysay inay guryahoda ku labtaan.
Qiimaynta bilowga ah ee booqashooyinka waaxda deg-degga ee degaanka ma aysan aqoonsanin kororka cabashooyinka la xiriira neefta oo ku adakan karto, taso keni karto marku dab halis dhaco welwel. Lewis wuxu kula taiyay qofkasta oo cafmad daro darmaya inuu la xariro degtor kisa. Gaar ahaan kuwa ugu nugul saameynta qiiqa, qasatan caruuta da’da yar iyo dadka da’da eh, ama dadka beer xanunka qabo iyo dadka wadna xanunka qaba. Roobabka iyo isbeddelka qaababka dabaylaha ayaa la filayaa subaxnimadii Talaadada, sida ay sheegtay Hay'adda Adeegga Cimilada, inay sii daayaan qiiqa ka soo baxa dhulka habeenkii.
Kim Kosmas, oo ah afhayeenka Portland Fire and Rescue, ayaa sheegay in isbeddelka cimilada uu gacan ka geysan doono hagajinta tayada hawada iyo caawinta shaqaalaha dab dabdaiska. Baarayaasha ayaa bilaabi doona baaritaankooda subaxnimadii Talaadada sida dabka oo ku bilaabmay.
Iftinka malinta ayaa sidoo kale u oggolaanaya inay baraa sababta dabka kiciyaay. Deganayaasha iyo Ganacsatadu waa inay qorsheeyaan inay nadiifiyaan meelaha dusha sare, ee dambas ka leh kuna nadafiyaan saabuun iyo biyo badan.
Kormeer dhacdooyinka sidan ah:
Raaci MultCo.us on Twitter and Facebook
Is qoritaanka Wargalinta Dadweynaha (In Somali or Arabic)
Residents between NE 72nd and NE 76th Ave, from Killingsworth to Alberta, still under evacuation orders